Sida looga helo emayl akoon kale oo ku jira Gmail | Androidsis
Sida looga helo farriimaha akoon kale oo emayl ah oo ku jira Gmail
Waxay u badan tahay taas xisaabtaada Gmail ka sokow adeegso adeeg kale oo boosto ah elektiroonig ah Laakiin adiga waxay kuugu muuqataa inay ka roon tahay inaad ku wada hesho dhammaan farriimaha hal codsi, taasoo ka dhigaysa nooc maamule ah. Waqti kasta waxaan fursad u leenahay in e-mayladan naloo soo diro cinwaanka emaylka ee adeegga Google, xitaa haddii cinwaan kale lagu soo hagaajiyo.
Markaa aan yeelno ka hel dhammaan emayllada akoonnada Gmail, oo ka dhigaysa nooc maamule ama xarun aan ku helno dhammaan e-maylkeena. Hab wanaagsan oo lagu maareeyo dhammaantood raaxada ugu weyn, gaar ahaan haddii aan ku helno qaar badan oo ka mid ah labada koonto. Marka waxaan xisaabin karnaa xisaabaadka ka imanaya barnaamijyada kale ee arrintan la xiriira.
Nidaamkan Waxaa lagu fulin karaa labadaba barnaamijka Gmail ee ku jira Android iyo nooca webka. Si aan ku filnayn, hawshu aad ayey uga fududdahay uguna dhakhso badan tahay codsiga taleefanka, taas oo ah waxa aan ku tusin doonno markan. Marka waad isku xidhi kartaa labada xisaabood si dhakhso leh wakhti kasta, si aad ugu hesho emayllada midkood oo aad si fiican ugu maamusho. Shaqadani waxay la jaanqaadi kartaa dhammaan noocyada adeegyada boostada, markaa waad isticmaali kartaa haddii aad isticmaasho Outlook, Yahoo, Office 365 ama adeegyo kale oo badan. Wax dhibaato ah kala kulmi meysid arrintan.
Sida loogu qurxiyo emayllada Gmail si aad hadhow u aqriso
Ku soo gal koontada emaylka ee Gmail
Sida caadada u ah kiisaskan, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa in lagu furo arjiga taleefanka. Caadi ahaan waxaan ku leenahay astaanta ku jirta menu-ka weyn, ama khaanadda arjiga Google. Waxaan fureynaa codsiga boostada oo caadi ahaan waxaan horeyba uheynay kalfadhiga inuu kudhaco kiiskan. Marka waxaan horeyba ugu jirnaa sanduuqa sanduuqa.
Marka xigta waxaan soo bandhigi doonnaa liiska menu ee dhanka arjiga. Si tan loo sameeyo, dhagsii saddexda xariijimo ee jiifka ah ee qaybta midig ee sare, si menu-kani u furmo. Xulashooyinka aan ka helno menu-kan, waa inaan gujineynaa xulashada Settings. Daaqad hore ayaa furmay, oo leh goobo guud, halkaas oo aan ku haysanno dhawr xulasho. Midka na xiiseynaya ayaa kujira shaashadda Gmail, waa maxay koontada add. Waxaan gujineynaa badhankaas.
Marka waa inaan dooro adeegga boostada ee aan rabno inaan ku biirno. Waxay kuxirantahay inaan koonto ku leenahay Muuqaalka, Yahoo ama adeegyo kale oo emayl oo hadda la heli karo. Waa inaan dooranaa nooca koontada ka dibna waa inaan galno xogteeda (magaca koontada iyo lambarka sirta ah), si aan u galno. Maaddaama ay tahay inaan u gudubno xiriirkeeda ama xiriirinta Gmail.
Waa naloo oggolaan doonaa inaan daryeesho waxa aan dooneyno dareenkaan. Waan soo dejin karnaa emayllada, xiriirada ama keliya emaylkii ugu dambeeyay, in kasta oo xulashooyinka ay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran adeegga iimaylka aad isticmaasho. Waxaan doorannaa xulashooyinka annaga noo daneynaya arrintan. Kaliya waa inaan raacnaa talaabooyinka ay Gmail iyo koontada kale ee emaylku tilmaamayaan. Ilaa aad ka gaartid shaashad kama dambays ah oo hawsha isku xidhka xisaabaadka la sheegay inay dhammaatay. Taas oo macnaheedu yahay inaan durba ku arki karno koontada emailka Google fariimaha naloogu soo dirayo midka kale waqti kasta.
Sida loogu abuuro farriimaha otomaatiga ah ee fariimaha ee Gmail ka yimid Android
Waa shaqo aad u faa'iido badan haddii aad leedahay dhowr xisaab email, laakiin waxaad dooneysaa inaad awood u yeelato inaad wax walba ku maamusho hal codsi oo ku saabsan Android. Tan iyo markii aad isku xirto akoonada, waxaad isla isla heli doontaa emayllada laguu soo diray, marka lagu daro inaad ka bixi karto setinka koontada kale, si aad u aragto fariimaha isku mid ah. Marka way ka raaxo badan tahay xagga maamulka, adeegsiga Gmail kiiskan oo ah maamule waxaas oo dhan, taleefankeenna Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida looga helo farriimaha akoon kale oo emayl ah oo ku jira Gmail
Redmi 8 iyo 8A waxay isku nadiifiyaan iyagoo isticmaalaya dhawaq
Noocyada 5G ee Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro ayaa la iibin doonaa berri